ပန်းကမ္ဘာ: June 2011
မှတ်စု မှတ်ရာ အတိုအထွာ
Be patient, but don’t be dull and stupid. သည်းခံ ခွင့်လွှတ်ပါ၊ သို့သော် ထုံထိုင်းတဲ့ လူညံ့မဖြစ်ပါစေနဲ့ ။ Treat respectfully, but don’t be slave. ကျိုးနွံစွာ ဆက်ဆံပါ၊ သို့သော် ကျွန်မဖြစ်ပါစေနဲ့ ။ Be brave, but don’t be lunatic.
သတ္တိရှိရှိနေပါ၊ သို့သော် လူမိုက်မဖြစ်ပါစေနဲ့ ။ Be active, but don’t be nervous.
ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ်နေပါ၊ သို့သော် ပြာတာတာ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ။ Be frugal, but don’t be cheese paring.
ခြိုးခြံချွေတာပါ၊ သို့သော် ကပ်စေးမနည်းပါနဲ့။ Donate generously, but don’t be just for show. ရက်ရောစွာ လှူဒါန်းပါ၊ သို့သော် ပြစားမှု မဖြစ်ပါစေနဲ့။ at
Traveler in Myanmar ( စံပြမင်းရွာ ၊ အလယ်တန်းကျောင်း )
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ( ၂၀၁၀ ) ခုနှစ်က ပြင်ဦးလွင်ကို ရောက်ဆဲမှာ အကယ်ဒမီ ပညာ့ဗိမာန် ဘော်ဒါဆောင်ရှိ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀ တန်းကျောင်းသူ ကျောင်းသား( ၇၀၀ ) ကျော်ကို ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက်စာကြိုးစားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ စာကျက်ရမှာ ပျင်းနေရင် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ပညာမတတ် သူ၏၀န်ထမ်း ဆိုတဲ့အတိုင်း သူတပါး၏ လက်အောက်ခံဘ၀ဖြင့် ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းရတတ်ကြောင်း စာပေဟော ပြောပွဲလေး ပြောပြဖြစ်ခဲ့တယ်။ တဆက်ထည်းမှာပဲ မိမိဇာတိ ရပ်ရွာရှိ အရာတော်မြို့နယ်၊ စံပြမင်းရွာရဲ့ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ ( ယခုတော့ အလယ်တန်း ရရှိနေပါပြီ ) လေးရှိ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားပေါင်း ( ၅၀၀ ) ကျော်ကို ဒုတိယအကြိမ် ဟောပြောပေးခဲ့ဖူးတယ် ၊ ဟောပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကတော့ ပြင်ဦးလွင်မှာ ပြောခဲ့တာတွေနဲ့ တော်တော်များများ တူညီပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီတကြိမ်မှာတော့ အတန်းငယ် ကလေးတွေဖြစ်တာကြောင့် ပုံပြင်တွေ၊ ၀တ္ထုလေးတွေကို အများဆုံး ကလေးတွေ နှစ်သက်အောင် ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်၊ အထူးသဖြင့် ကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ တစ်မျိုး တစ်မျိုးစီကို ယုံကြည်ပြီး လက်ခံကျင့်သုံးရာက နောက်ဆုံးမှာ ကံကိုသာ အားကိုးကာ မကြိုးစားပဲ နေမိတဲ့ ငါးကလေးဟာ ဒယ်အိုးထဲ ရောက်ခဲ့ရ တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ နောက်တစ်ခါ လူ့ဘ၀မှာ မျှော်လင့်ချက် ရည်မှန်းချက်ရှိမှသာ ဘ၀တိုးတက်နိုင်ကြောင်း၊ ဘ၀ပန်းတိုင် မရှိလျင် စိတ်လေပြီး ဘ၀ဟာ မတိုးတက်နိုင်ကြောင်းတွေနှင့် ပုံပြင်လေး တပုဒ်ကို ပြောခဲ့သေးတယ်၊ ပုံပြင်လေးက ဒီလို၊ ဟိုအရင်တုံးက အထက်အညာဒေသမှာ တောထဲမှာနေ၊ တောထဲမှာပဲ စား၊ တောထဲမှာပဲ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ထန်းတက်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရတဲ့ ထန်းတက်သမား မိသားစု တစ်စုရှိခဲ့တယ်၊ အဖေလုပ်သူက ထန်းပင်ပေါ်တက်ရင် သားလုပ်သူ ၁၀ နှစ်လောက် ကလေးလေး က နောက်ကနေ ထန်းရည်အိုးလေးတွေထမ်းထန်းလျက်ချက်ရာ သူတို့နေအိမ် တဲကုပ်လေးဆီကို ပို့ပေး သယ်ပေးရတယ်ပေါ့၊( ဆင်းရဲရှာတော့ ကျောင်းတက်ဖို့ဆိုတာစဉ်းကို မစဉ်းစားနိုင်တာ၊ အခုခေတ် အနေအထားနဲ့ တက်နိုင်ဖို့လဲ မလွယ်ကူပါဘူး )
တနေ့မှာတော့ အဖေလုပ်သူက ထန်းပင်ပေါ်က ဆင်းလာချိန် ကလေးကို မေးတယ်၊ ငါ့သား မင်းကြီးလာရင် ဘာလုပ်မလဲ ပြောစမ်းကွာ …. ဆိုတော့ အာ အဖေကလဲ အဖေ့လိုပဲ ထန်းတက်ပြီး အသက်မွေးမှာပေါ့ဗျ … လို့ ဖြေလိုက်သတဲ့။
ဒီအခါ အဖေလုပ်သူက ထန်းပင်ပေါ်က ဆင်းလာကာစ မောမောပန်းပန်းဆိုတော့ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ …. မင့် မအေ ငါ လုပ်လိုက်ရ … ငါငယ်ငယ်တုံးက လေယာဉ်ပျံကြီး မောင်းမယ် လို့ စိတ်ကူး ကြံရွယ်ခဲ့တာတောင် အခု ကြီးလာတော့ ထန်းတက်စားနေရတာ၊ မင်းက ထန်းတက်ရုံလောက်ပဲ ရည်မှန်းချက်ထားလို့ကတော့ … ဟင်း .. ဟင်း … မင်း ခွေးဖြစ်မဲ့အကောင် လို့ အော်ငေါက်ဆဲဆိုပြီး ခြေထောက်နဲ့ ကန်ကျောက်သတဲ့။ အဲဒီလို အောက်တန်းကျတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မျိုး မထားရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောလိုက်တော့ ကလေးတွေ တော်တော် သဘောတွေ့ကြတယ်၊ ဒါကြောင့် ဘ၀ရည်မှန်းချက်ဆိုတာ ဖြစ်တာ မဖြစ်တာ အသာထား၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲ နှလုံးသား ထဲမှာတော့ မြင့်မြင့်မားမား ထားရှိဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဒါမှသာ အသက်အရွယ် ကြီးလာချိန်မှာ မှန်းထားသလောက် မဖြစ်လာတောင် အထိုက်အလျောက် အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်ကြောင်း စတာတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်၊ နောက်ထပ်ပြောဖြစ်တာတွေကတော့ ရည်မှန်းချက်မရှိရင် ဘ၀ဟာ ထိန်းကွပ်မှုမဲ့ပြီး သူတပါးထက် အောက်ကျ နောက်ကျ ဖြစ်တတ်ကြောင်း၊ မိဘဆရာသမား တွေဆိုတာ လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပဲ တင်ပေးနိုင်ကြောင်း၊ ဆရာ ဆရာမတွေ ခိုင်းမှ မဟုတ်ပဲ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်က ကြိုးစားချင်စိတ် ရှိမှသာ စာမေးပွဲဆိုတာ အောင်မြင်နိုင်ကြောင်း၊ အောင်မြင်လာတဲ့တနေ့မှာ အောက်ခြေမလွတ်ပဲ ပုံမှန်ဆက်လျောက်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ အမြင့်က ပြုတ်ကျလျင် ပို၍ အကျနာတတ်ကြောင်း၊ ဥာဏ် ၀ီရိယ ပြည့်စုံသော်လည်း ကံ မကောင်းက မအောင်မြင်တတ်ကြောင်း၊ ကံကောင်းဖို့ အတွက် သရဏဂုံ၊ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ၊ စတာတွေကို ရွတ်ဖတ်သင့်ကြောင်း၊ ကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ ပြည့်စုံနေလျင် ဘ၀မှာ ဘာမဆို ရယူနိုင်ကြောင်း နဲ့ ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်၊ သရဏဂုံသုံးပါး နဲ့ သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာလေးတွေလဲ သင်ပေးခဲ့ရတယ်၊ ကျမ္မာရေးကို ဂရုမစိုက်ပဲ စာကိုသာ ဖိကျက်နေလျင် စာမေးပွဲနီးမှ နေမကောင်းဖြစ်ပြီး ဘာသာစုံအောင် မဖြေနိင်ဖြစ်တတ်ကြောင်း၊ စာမကျက်ချင်ပဲ စိတ်အလိုလိုက်ကာ နေလျင် အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀အဆင့်အတန်းကို မရောက်နိုင်ကြောင်း၊ ပညာမတတ် လျင် ပထမဆုံး ကိုယ့်ဘ၀ မတိုးတက်ပဲ အောက်ကျ နောက်ကျဖြစ်တတ်ကြောင်း၊ ဒုတိယ ကိုယ့်မိသားစု၊ နောက် ကိုယ့်ရပ်ရွာ၊ ကိုယ့်မြို့နယ်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ စသည်စသည်ဖြင့် ကိုယ်မကြိုးစားလိုက်တာနဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ချီပြီး ထိခိုက်နစ် နာ နိုင်ကြော င်းတွေ လဲ ပြောခဲ့ရတယ်၊ ကိုယ့်ဘက်ကတော့ တော်စေချင်၊ တတ်စေချင်လို့ အများကြီး ပေးလိုက်မိတယ်၊ သူတို့ စွမ်းအားရှိသလောက် ယူကြလိမ့် မယ်လို့ တွေးပြီး ပီတိဖြစ် ၀မ်းသာခဲ့ရပါတယ်၊
မေတ္တာဖြင့် အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ M.A ( ပန်းကမ္ဘာ )Date. 27.Jun.2011 စိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေကြတဲ့ ကလေးငယ်တွေ
ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဒေသတို့ ထုံးစံအတိုင်း မြေကြီးလောက် ကောင်းတဲ့ ဒေသမရှိဘူး၊ ပါကေးခင်းမလို၊ ဖယောင်းပုဆိုးမလို၊ သစ်သား ခင်းမလို၊ ကောင်းလိုက်တဲ့ ဟောခန်းမ လို့ ဆိုရမယ် လက်အုပ်လေးတွေ ချီနေတာကိုက ချစ်စရာလေးတွေ၊ စာရေးသူက ပြောပါတယ်၊ စိတ်ကြိုက်ထိုင်လို့ရတယ်၊ လက်အုပ်မချီပဲ နေလို့ ရတယ်၊ ပြောတဲ့စကားလေးတွေကို နားလည်တယ်၊ သေသေချာချာ နားထောင်တယ် ဆိုရင် တော်ပြီ လို့ ပြောထားတာကို လက်အုပ်ကလေးတွေ ချီမြဲပဲ .. အဲဒီလောက် လိမ္မာကျပါတယ်၊ အိုးမဖုတ်ခင် အိုးလုပ်စဉ်ဝယ် လို့ ဆိုထားတယ် မဟုတ်လား ...
စာသင်ကျောင်းအုပ်ကြီး ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အမှတ်တရ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ၀ါဆို စတဲ့ အခါကြီးရက်ကြီးတွေ နဲ့ ကျောင်းလပတ်စာမေးပွဲတွေ ပြီးရင် ဒီလို သန့်ရှင်းရေးပေါ့နောက်ထပ် လူကြီးတွေ လာရင်လဲ မဖြစ်မနေ သန့်ရှင်းရေး၊ ကျောင်းသား ငါးရာကျော်အတွက် ဒီလိုပဲ သောက်ရေလှောင်ကန် ထားပေးရတယ်၊ ဖြစ်သင့်တာကတော့ စတီးရေလှောင်ကန် ဆိုရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိမ့်မလဲ လို့ တွေးနေမိတယ်၊ နောင်တစ်ချိန်မှာတော့ ဖြစ်နိုင်ကောင်းရဲ့ ၊ လာမယ့်နှစ်မှာ ၉ တန်း ၁၀ တန်းတွေလဲ တွဲဘက် အထက်တန်းကျောင်း ဖွင့်တော့မယ် ဆိုတော့ ....
အလယ်တန်းကျောင်းအတွက် အဓိက အဆောက်အဦးပါပဲ၊ လာမယ့်နှစ်မှာတော့ မန္တလေးက အလှူရှင်တစ်ဦးက မတည်ပြီး နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင် တစ်ဆောင် ဆောက်မယ်လို့ ကြားသိရတယ်၊ နောက်ထပ် လိုအပ်တာကတော့ အများကောင်းမှုပေါ့
ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာဖွေသူ ( သို့ )သံဘိုဆရာတော်( ၂ )
အံ့သြစရာ ကောင်းလွန်းသည်ကား ကံရင်းရွာအနီး တောထဲ တောင်ထဲတွင်သာ တသက်လုံး သီတင်းသုံးနေသော ဆရာတော်သည် သီဟိုဠ်ကျွန်းမှ စေတီပုထိုးများ၊ သမိုင်းဝင်နေရာများ၊ အိန္ဒိယ ဗုဒ္ဓဂါယာမှ စေတီပုထိုးများကို ဘယ်နေရာ မှာ ဘာရှိသည်၊ ဘယ်နေရာရဲ့ အရှေ့ဘက်နားမှာ ဘာရှိသည် စသဖြင့် တန်းစီကာ ပြောသွားသည်မှာ မိမိကိုယ်တိုင် ရောက်ခဲ့ သွားခဲ့သော စာရေးသူပင် ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် ငေးနေရ၏၊ တချိန်တည်းပင် စိတ်ထဲမှလည်း အကြိမ်ကြိမ် ဦးညွတ်နေမိသည်။ နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စာရေးသူ၏ စိတ်ကို ထိတ်လန့်စေသောအရာကား စိတ်ထဲမှ မေးလိုက်သော မေးခွန်းကို ပါးစပ်မှ အလိုအလျောက်ဖြေကြားခြင်းပင်၊ ထိုအခါမှစ၍ စကားကိုရော၊ စိတ်ကိုရော ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရ၏၊ စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ် မပြောဆိုရဲတော့ပေ။ ဆရာတော်နှင့် စာရေးသူတို့ ပြောဆိုသော စကားအချို့---ဦးဇင်းလေးတို့ ဘယ်က ကြွလာပြီး ဘယ်မှာ သီတင်းသုံးကြသလဲ .
တပည့်တော်တို့ ( စာရေးသူနှင့် မိတ်ဆွေတစ်ပါး ပါသည် )ဇာတိက ဒီအရာတော်နယ်ထဲကပဲ အရှေ့ဖက် မင်းရွာကြီး ကပါဘုရား၊ နေတာက တော့ တပည့်တော်က မနှစ်က သီဟိုဠ်မှာ ၀ါဆိုခဲ့ပါ တယ်ဘုရား၊ အော် နိုင်ငံခြား သာသနာပြုမယ့် သူကိုး၊ ကြိုးစားပေါ့ နိုင်ငံခြားသာသနာပြုဆရာတော် ဘိက္ခုအရိယဓမ္မ တို့လို အောင်မြင်အောင် လုပ်ပါ၊ တပည့်တော်တို့တော့ အရှင်ဘုရားတို့လို ဘွဲ့တွေ ဒီဂရီတွေ ရအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး၊
( ထိုဆရာတော်ပြောသော စကားတွင် ဘိက္ခုအရိယဓမ္မ၏ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ပြဿနာအမေးအဖြေများ စာအုပ်သည် စာရေးသူ လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ကျော် ရဟန်းဖြစ်ကာစက စာအုပ်ဆိုင်တိုင်းတွင် ၀ယ်လို့မရသောကြောင့် ခက်ခက်ခဲခဲ မန္တလေး ညဈေးတန်း စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တခုတွင် တွေ့သောကြောင့်ဝယ်ထားကာ လက်မလွတ်တန်းဖတ်နေသည်ကား ယနေ့ အထိပင်၊ ရှားပါးစာအုပ်ဟု ပြောရပေမည်၊ တောထဲ တောင်ထဲမှာ နေသော ဆရာတော်ကြီးသည် ထိုစာအုပ်ပါ အကြောင်း အရာတို့ကို ပြောလာတော့ စာရေးသူမှာ လေးစားအထင်ကြီးမိ၏) တင်ပါ့ဘုရား၊ ဒါပေမယ့် တပည့်တော်ကတော့ ဆရာတော့်လို သစ်တပင်အောက် ၀ါးတစ်ပင်အောက် ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်နေတာကို နှစ်သက်ကြည်ညိပြီး အားကျမိပါတယ်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့ ဘွဲ့တွေများစွာ ရနေသော်လည်း မြတ်စွာဘုရားကတော့ စာတွေ ပိဋကတ်တွေ ဘယ်လောက်တတ်တတ်၊ အမြင့်ဆုံး တိပိဋကဓရ ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတောင် မချီးမွမ်းပဲ တောတောင်ထဲမှာ သီတင်းသုံးလေ့ရှိတဲ့ အရှင်ဘုရား တို့ကိုသာ ချီးမွမ်းတော် မူတာပါဘုရား .. အင်း ဘုရားကတော့ ဟောထားပြီးသားပါ၊ နတ်သုဒ္ဓါ ကောင်းမှန်း သိကြသော်လည်း အားလုံးကတော့ ခံစားနိုင်ဖို့ ရဖို့ကို အားမထုတ်ချင်ကြဘူး၊ အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူး၊ တင်ပါ့ တပည့်တော်လဲ စိတ်ကူးရှိပါတယ်ဘုရား၊ တစ်ချိန်မှာတော့ စိတ်ကြိုက် အချိန်ပေးပြီး အားထုတ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမှာပါဘုရား၊
( သတိထားသင့်သည်ကား လူဖြစ်စေ ရဟန်းဖြစ်စေ ပညာတွေ တတ်လေလေ ဆင်ခြင် စဉ်းစားဥာဏ်တွေ များလာကာ ကိစ္စတော်တော်များများကို လွယ်လွယ်ဖြင့် မယုံကြည်တတ်တော့ပေ။ ဟိုဟာကို ဆန်းစစ်ခြင်၊ ဒီဟာကို ဆန်းစစ်ခြင် ဖြစ်လာပြီး လက်တွေ့ကို ပိုအားသန်လာတတ်၏၊ ဆိုလိုသည်မှာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော စကားများ၊ ဇာတ်တော်လာ ၀တ္ထုကြောင်းများ၊ ကံအကြောင်း၊ ဈာန်အဘိဥာဉ်အကြောင်း၊ သံသရာအကြောင်း၊ နိဗ္ဗာန်အကြောင်း၊ မြင့်မိုရ်တောင် ရှိမရှိ စသည်စသည် တို့ကို ရာနှုန်းပြည့် လက်ခံနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းလာတတ်၏၊ ထိုသို့ ခဲယဉ်းခဲယဉ်းလာရာမှ နောက်ပိုင်းတွင် လမ်းလွဲသို့ ရောက်သွားကြသော ရဟန်းပညာရှင်၊ လူပညာရှင်များမှာ သာသာနာ့သမိုင်းတွင် တော်တော်များများ ရှိခဲ့ဖူး၏။ ယခုလဲ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပညာရပ်မျိုးစုံကို သင်ယူနေကြကုန်သော မျိုးဆက်သစ် လူငယ်လေးများ ဘာသာရေးအကြောင်းကို သေသေချာချာ မလေ့လာပါပဲ အနောက်တိုင်းက အတွေးအခေါ် စာမျိုးတွေကို ဖတ်ကာ ဗုဒ္ဓစာပေများနှင့် ရောနှောပြီး ဝေဖန်လိုက်သောအခါ ဘာသာရေး အသိက အားနည်းနေသော ကြောင့် လမ်းလွဲသို့ ပါသွားတတ်ကြ၏ ၊ သတိထားဖွယ်ပင်။ ဆက်လက်ကာ ပဋိသန္ထာရစကား လျောက်ထားဖြစ် သည်များက ---ယခု ဆရာတော့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ၀တ်ရုံထားတဲ့ သင်္ကန်းဟာ ဘယ်နှစ်နှစ် ရှိပါပြီလဲဘုရား …ခဏမျှ စဉ်းစားနေပြီးနောက် .. ၁၂ နှစ်ရှိပါပြီ …အိုး မိုင် ဗုဒ္ဓ ဟု ရေရွတ်လိုက်မိတော့၏ ( ပါးစပ်ကမဟုတ်ပါ၊ စိတ်ထဲကသာ ) သက်တော်ရော သိပါရစေဘုရား …၆၃ နှစ် ရှိပါပြီ ( သာသနာ့ဘောင် ၀င်တာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ခဲ့ပြီ ) စာပေမှ ပေးသော အသိပညာဖြင့် ဘ၀ကို ပြောင်းပြန်လှန်ကာ ဆိတ်အုပ်ကို ကျောင်းသော ဆိတ်ကျောင်းသား ဘ၀မှ ကိုယ့်စိတ်ကို ဘာဖြစ်နေသလဲ ဘာတွေ ကြံစည်နေသလဲ ရာဂစိတ်တွ ဖြစ်နေသလား ဒေါသစိတ်တွေ များနေသလား စသည်ဖြင့် အချိန်ပြည့် ဆန်းစစ်နေသော စိတ်ကျောင်းသား ဘ၀ရောက်အောင် တက်လှမ်းခဲ့ခြင်းကား သာသနာတော် အတွက် အားတက်စရာ အံ့သြစရာပါပေ၊ နောက်ဆုံးတွင် စာရေးသူတို့ ပြန်ခါနီး၌ --ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော် ငယ်ရွယ်သည့်အလျောက် ကံသုံးပါးတို့တွင် တပါးပါးဖြင့် ပြစ်မှားမိသည်များ ရှိခဲ့လျင် ခွင့်လွတ်သည်းခံတော်မူပါဘုရား ဟု တောင်းပန်လျောက်ထားကာ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့တော့သည်။ ထိုဆရာတော်အား စာရေးသူကိုယ်တိုင် အနီးကပ်လေ့လာ ဖူးတွေ့ပြီး အကဲခတ်ကြည့်မိသောအခါ …ဆရာတော်သည် --၁။ ပံသုကူဓုတင် - ပံသုကူ သင်္ကန်းကိုသာ ၀တ်ရုံ၏၊၂။ တိစီဝရိတ်ဓုတင် - ခါးဝတ်သင်းပိုင်၊ ကိုယ်ရုံသင်္ကန်းနှင့် ၂ထပ်သင်္ကန်းဟူသော သုံးထည်သော သင်္ကန်းကိုသာ အမြဲ သုံးစွဲ၏၊၃။ ပတ္တပိဏ္ဍိကဓုတင် - ဆွမ်းခံရသမျှ အချိုအချဉ်ရောကာ ပတ္တပိုဏ် ဘုဉ်းပေး၏၊၄။ အာရညကင်ဓုတင် - တောအရပ်၌သာ သီတင်းသုံး၏၊၅။ ပိဏ္ဍပါတိက ဓုတင် - ဆွမ်းခံ၍ ရရှိလာသော သပိတ်အတွင်းမှ ဆွမ်းကိုသာ ဘုဉ်းပေးလေ့ရှိ၏၊၆။ ဧကာသနိကဓုတင် - တနေရာ တထပ်တည်းသာ ဘုဉ်းပေးတော်မူ၏၊
၇။ ခလုပစ္ဆာဘတ္တိကဓုတင် - ဆွမ်းဘုဉ်းနေစဉ် နောက်ထပ် လောင်းလှူသော ဆွမ်းကိုမဘုဉ်းပေးတော့ပေ။၈။ သပဒါနစာရိကဓုတင် - အိပ်စဉ်ရပ်လျက်သာ ဆွမ်းခံလေ့ရှိ၏၊၉။ ယထာသန္တတိက ဓုတင် - ခင်းထားတိုင်းသော နေရာ သို့မဟုတ် ကျောင်း၌သာ သီတင်းသုံးလေ့ ရှိ၏၊၁၀။ နေသဇ္ဇိဓုတင် - နေ့ဖြစ်စေ ညဖြစ်စေ ကျောခင်းကာ လျောင်းစက် ကျိန်းစက်ခြင်းမရှိပေ။ ( အကယ်၍ မခံနိုင်လောက်အောင် ညောင်းညာကိုက်ခဲနေပါက သစ်ပင်တစ်ပင်ကို မှီကာ ခေတ္တခဏမျှ မှေးစက်လို့ ရသည် ဟု ဗုဒ္ဓစာပေမှာ လာရှိသည် )
ဆရာတော်သည် ( ကိလေသေ ဓုနာတီတိ ဓုတော ) ဟူသော သဒ္ဒါရေး ဂရမ်မာအရ ကိလေသာတို့ကို ခေါင်းပါးအောင် ကျင့်ခြင်း၌ ပြင်းထန်လှသော သာမာန် ရဟန်းတော်များ မကျင့်သုံးနိုင်သော ဓုတင် အကျင့် ၁၃ ပါးရှိရာတွင် ( ၁၀ ) ပါးတိတိ ပြည့်စုံနေကြောင်း ကြည်ညိုဖွယ် တွေ့ရှိရ၏။ ဆရာတော်ဆီသို့ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ လူပရိသတ်များ အမြဲမပြတ်သွားရောက်ဖူးနေကြ၏၊ အကယ်၍ စာဖတ်ပရိသတ်များ သွားရောက်ဖူးလိုပါက မုံရွာ ကျောက္ကာ အရာတော် မြို့ မြောက်ဘက်လမ်းမှ သွားလျင် မြင်းမူဆီသို့ မရောက်မီ ( ၁၂ ) မိုင်ခန့် ကားနှင့် ဆိုင်ကယ်နှင့် သွားလျင် ရောက်နိုင်ပါသည်။ တောင်ဘက်လမ်းကြော မြင်းမူဘက်မှ သွားလျင် ထီးဆောင်းလမ်းခွဲမှ ( ၁၈ ) မိုင်ခန့် မြောက်တည့်တည့် မောင်းသွားပြီး မလဲသာ ကန်ရင်းရွာ ဟု မေးကာ သွားလျင် ရောက်နိုင်ပါသည်။ တစ်ချို့လဲ အချိန်ကို မသိပဲ ခက်ခက်ခဲခဲ သွားရောက်ပြီးမှာ ဆရာတော်ကို မဖူးရသည်လည်း ရှိတတ်ကြ၏၊ အကြောင်းကား ဆရာတော်သည် မနက်ပိုင်း ဆွမ်းခံထွက်ချိန် ၇ နာရီခန့်လောက်နှင့် နေ့ဆွမ်း မဘုဉ်းမီ အထိသာ ဖူးမျှော်ခံလေ့ရှိ၏၊ နေ့လည်ပိုင်းမှစ၍ ညနေပိုင်း ၆ နာရီကျော်လောက်အထိ လူသူ ကင်းဆိတ်သော သရက်တောထဲ၌သာ တပါးတည်း တရားရှုမှတ်ကာ နေလေ့ရှိ၏။ နေ့လည် ၂ နာရီလောက် မည်သည့်ဧည့်သည်ကိုမျှ အတွေ့မခံပဲ တပါးတည်း အရိပ်အာဝါသကောင်းသော သရက်တောကြီးအတွင်း တရားအား ထုတ်နေသောဆရာတော်အား နောက်တခေါက် စာရေးသူတို့ ရောက်သွားချိန်တွင် မဖူးမြင်ရသောကြောင့် ဆရာတော်ရှိရာ သရက်တောကြီးအတွင်းပိုင်းအထိ လိုက်သွားကာ အားပါးတရ ဖူးမျှော်ခဲ့၏၊ သစ်ပင်ရိပ် ကလည်း အေးစိမ့်နေ၏၊ ငှက်အော်သံ မျိုးစုံ ကြားရပြီး တော်တော် စိတ်ကြည်နူးစရာပါပေ၊ သေချာကြည့်လျင်လူတရပ်စာ မလွတ်သော ထန်းလက်တဲကုပ်လေးအတွင်း၌ သင်္ကန်းရော င်လေး မြင်ရပေမည်၊ ထိုကား ဆရာတော်၏ ပုံတော်ဖြစ်၏ တဲကုပ်လေးဘေးမှ ဆရာတော်သောက်သုံးသော ရေအိုးနှင့် ရေစစ်ပါ သောက်ရေခွက်ကလေး ( ဘယ်လောက် ရိုးရှင်း လိုက်တဲ့ဘ၀ ဖြစ်သလဲ စဉ်းစားနေမိတယ် ) ဆရာတော် တည်ထားသော သယမ္ဘူစေတီ ဘေးမှ စိုက်ပျိုးထားသော ညောင်ဗုဒ္ဓဟေ ဗောဓိပင်ပျို လို့ သိရတယ်၊
ပင်စည်လုံးပတ်ကလဲ ချောမွတ်ပြောင်ချော နေတာပဲ၊ ဗောဓိပင်တိုင်းမှာ တွေ့ရခဲတဲ့ ညောင်ပင်မျိုးလို့ ဆိုရမယ်သရက်တောကြီးနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် စုပေါင်းအလှူရှင်များက မြေအောက် လှိုဏ်ခေါင်းပါ ကျောင်းဆောင်ကို အားတက်သရော ဆောက်လုပ်နေကြလေရဲ့ လှိုဏ်ခေါင်း ခေါင်မိုးနှင့် ပကတိမြေပြင် အညီအမျှ တည်ဆောက်နေကြဆဲမြေအောက် လှိုဏ်အတွင်း၌ ပေ ( ၆၀ )ကျယ်ဝန်းသော စကြံလမ်းကိုလဲ မပါမဖြစ် ဆောက်လုပ်ကြတယ်စာရေးဆရာတို့ ထုံးစံအတိုင်း ပြောင်းတောကိုလဲ ဖြတ်ခဲ့တယ်၊ ပေါင်းတော မြက်တောကိုလဲ ဖြတ်ကာ ခဲခဲယဉ်းယဉ်း ပင်ပင်ပန်းပန်း သွားရောက်ဖူးမြှော်ခဲ့တယ်၊ မိတ်ဆွေရဟန်းတပါးက မေးတယ်၊ အပင်ပန်းခံကာ သွားနေတာလား တဲ့၊ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်၊ အချိန်ပြည့် ကုသိုလ်ဇောစိတ်တွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် နိဗ္ဗာန်နဲ့ ပိုနီးနိုင်တာပေါ့ လို့။ ဟုတ်တယ်လေ ဘုရားစာပေတွေထဲမှာ စိတ်ကလေးနဲ့ ဘုရားရှင်ကို ကြည်ညိုသူအတွက် နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ် တရားထူးရနိုင်ဖို့ ကုသိုလ်အထောက်အပံ့ ဖြစ်တယ် လို့ ဟောထားတာပဲ၊ အခုလဲ သံဃာနုဿတိကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့လို့ ဖြေလိုက်တယ်။ ထိုနေရာမှ အပြန် မိတ်ဆွေ ဓမ္မကထိက ရဟန်းတပါးက မှတ်ချက်ပြုသည်မှာ -- အော် ငါတို့ အပါအ၀င် အခုခေတ် ဘုန်းကြီးများဟာ ကျောင်းဆိုရင်လဲ ထန်းလက်တဲကုပ် ၊ သစ်သားကျောင်းများမှာ နေဖို့ဝေးစွ၊ အာစီ တိုက်ကျောင်း ပြောင်ပြောင်လက်လက်တွေမှ သီတင်းသုံးချင်နေကြတယ်၊ သင်္ကန်းဆိုရင်လဲ တန်ဖိုးများ မာတင်သင်္ကန်း သရီးရိုင်ဖယ် စသဖြင့် အကောင်းစားမှ ၀တ်ချင်ရုံချင်ကြတယ်၊ ဆွမ်းကျပြန်တော့ ဘာထူးသလဲ အသားဟင်းတွေ ဟင်းကောင်းတွေ ပါမှ ဘုဉ်းပေးချင်ကြတယ်၊ ဆေးပစ္စည်းဆိုရင်လဲ နိုင်ငံခြားဖြစ်ဆေးတွေမှ သုံးစွဲချင်တယ်၊ အင်း ……ဒီဆရာတော်နဲ့တော့ တစ်ခုမှ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရနိုင်ပါလား …ငါတို့ကတော့ သင်္ကန်းကောင်းကောင်းနဲ့ ကားကောင်းကောင်းကြီး စီးပြီး ခါးမှာ ဟန်းဖုန်းတွေ ချိတ်လို့ ပိုက်ဆံအိပ်ထဲမှာလဲ အနည်းဆုံး ငါးသောင်း လောက် ထည့်ကာ မော်ကြွားမာန်တက်နေသမျှ ဒီနေရာရောက်မှ မာန်တွေ အလိုလို ကျမိတော့တယ်၊ ရှက်စရာ ကောင်းလိုက်တာ မောင်သုနန်ရာ တဲ့။ အင်း အဲဒီလို အမြင်မှန်ရသွားတာကပဲ အားလုံးအတွက် သာသနာအတွက် အနာဂါတ်ကောင်းကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ လမ်းစပဲပေါ့၊ ဘ၀အောင်မြင်ရေးထက် ဘ၀ကိုတန်ဖိုးရှိစွာ နေထိုင်ရေးက ပိုအရေးကြီးတယ် တဲ့၊ သူလည်းပဲ တပည့်တော်တို့လို ဘ၀အောင်မြင်ရေးတွေကို အလေးမထားပဲ ဘ၀မှာ အကျိုးရှိစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ကိုပဲ ကြိုးစားနေတာဆိုတော့ တပည့် တော်တော့ သာဓုအကြိမ်ကြိမ် ခေါ်နေမိတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ ကုသိုလ်တွေ အများကြီးလဲ ရပါတယ် အရှင်ဘုရားရယ် လို့ အားပေးစကားပြော ရင်း ဒီတစ်ကြိမ် ခရီးသွားက အပြန်လမ်းမှာလဲ နှုတ်ဆိတ်နေကာ လိုက်ပါလာမိပါတော့သည်။ မေတ္တာဖြင့် အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ M.A ( ပန်းကမ္ဘာ )Date.23.Jun.2011
ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာဖွေသူ ( သို့ )သံဘိုဆရာတော်
ဆိတ်ကျောင်းသား ဘ၀မှ စိတ်ကျောင်းသားဘ၀ သို့ ကူးပြောင်းကာ ၀ဋ်ဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်မှု ကို ရှာဖွေခဲ့သော ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သော မထေရ်တစ်ပါး ရှိပါသည်။ ထိုမထေရ်ကား စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ အရာတော်မြို့နယ် မလဲလာ ကန်ရင်း ရွာတို့၏ မြောက်ဘက်နားရှိ သံဘိုတောရကျောင်းတွင် သီတင်းသုံးနေသော ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ ဖြစ်၏။
စာရေးသူ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ကျော်(၂၀၀၉)ခုနှစ်က သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် M.A ဘွဲ့အတွက် ကျောင်းတက်နေစဉ် သတင်းတစ်ခု ကြားခဲ့ရ၏၊ အရာတော်မြို့နယ်အတွင်းတွင် တောရဆောက်တည်ကာ နေ့မနား ညမအား ဓုတင်ကျင့်သုံး နေသော ကြည်ညိုဖွယ် ဆရာတော်တပါးပေါ်ပေါက်နေသည် ဟူသောသတင်းပင်၊ ထိုအချိန်ကတည်းက ကိုယ့်ဇာတိနှင့် နီးကပ်သော နေရာမို့ ရောက်အောင် သွားဖူးမည်၊ အနည်းဆုံး ကုသိုလ်တော့ ရလိမ့်မည် ၊ အရှုံးတော့ မရှိနိုင် ဟူသောဆုံးဖြတ်ချက် ထားခဲ့၏၊ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ရောက်အောင် တကူးတက သွားရောက်ဖူး မြှော်သောအခါ တကယ်စင်စစ် ကြည်ညိုဖွယ် ရာများကို တွေ့ခဲ့ရ၏။ သာမာန် လူတို့ကတော့ ကြည်ညိုသော သဒ္ဓါတရားစိတ် တခုထဲနှင့် ရဟန္တာတစ်ပါး ဟူ၍ပင် တင်စားခေါ်ဝေါ်နေကြ၏၊ ထိုဆရာတော် ပြောသမျှ စကား၊ လုပ်သမျှ အမူအရာတို့ကို ကြည့်ကာ ကိုယ်လိုချင်သလို အတိတ်ကောက်ပြီး ဂဏန်းထိုးကြ သောလူတို့သည်လည်းအများအပြားပင်၊ ပေါက်သူတို့က မှန်သည် ဟု သတ်မှတ်ကြသော်လည်း မပေါက်သူတို့က ရေငုံနှုတ် ပိတ် နေတတ်ကြ၏၊ ထိုဆရာတော်ကား ဘယ်လို နည်းနှင့်မျှ ဂဏန်းပေးသည် မရှိဖူးချေ။ စာရေးသူသိသော ဆရာတော်၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
ဆရာတော်သည် ကန်ရင်းရွာ ဇာတိဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်ကပင် မရှိဆင်းရဲဖြစ်သောကြောင့် မူလတန်း အဆင့်လောက်ပင် ကျောင်းနေခဲ့ဖူးသည် ဟူ၏၊ မိဘ၂ ပါး စုံမရှိပဲ အမေတစ်ခု သားတစ်ခု ဘ၀ဖြင့် ကြီးပြင်းခဲ့ရကာ ရွာထဲမှ လယ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦး ၏ အကောင်ရေ ( ၂၀၀ ) လောက်သော ဆိတ်အုပ်ကို ထိန်းကျောင်းကာ ဘ၀ကို ဖြစ်သလို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက စာဖတ် အလွန်ဝါသနာပါသောကြောင့် တွေ့သမျှ စာအုပ်မျိုးစုံကို တောတောင်ထဲ၌ ဆိတ်ကျောင်းရင်း ဖတ်ရှုခဲ့၏၊ ရသမျှ အချိန်တွေကို ဆိတ်ကျောင်းရင်း စာဖတ်ရင်း ဖြင့် ကုန်လွန်ခဲ့သည်ဟူ၏၊ အချိန်တွေ ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စာဖတ်သက် ရင့်ကျက်လာသောအခါ စာကြီးပေကြီးများ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းကျမ်းများ၊ ၀ိပဿနာစာအုပ် များကို ဖတ်ပြီး လူ့လောက၏ မတည်မြဲပုံ၊ လောကဓံတို့၏ ရိုက်ခတ်မှု၊ တနှစ်ပြီးတနှစ် ကုန်ဆုံးကာ အသက်တွေကြီးရင့် လာပြီး လူ့လောက၏ အနှစ်သာရ မရှိမှု၊ နေရစဉ်အချိန်လေးအတွင်းမှာလဲ စိတ်ချမ်းသာချိန်ကနည်းနည်း၊ ဆင်းဆင်းရဲရဲ ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာဖွေနေရခြင်းကြောင့် မဆုံးနိုင်သော လူမှု ဒုက္ခ တို့ကို တွေ့မြင်လာပြီး ထိုမှတဆင့် လူ့လောကမှ ထွက်မြောက်နိုင်ရာ ရဟန်းဘ၀၊ ထိုမှ ထိုမှ တမဂ်တဖိုလ်ရဖို့အတွက် ကျင့်စဉ်လမ်းများ စသည်ကို တွေ့မြင်လာပြီး သာသနာ့ ဘောင် ၀င်ရောက်လိုသော စိတ်များ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်လာသည် ဟူ၏။ ထိုအခါ မိခင် ဖြစ်သူကို တောင်းပန်ကာ “ အမေ အမေ့ကို လုပ်ကျွေးလာတာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါးကြာခဲ့ပါပြီ၊ ဒီနှစ်မှာတော့ သား ရဟန်းဘောင်တက်လိုပါတယ်၊ သားအတွက် သင်္ကန်းတစ်စုံသာ ၀ယ်ပေးပါ ‘’ ဟု တောင်းဆိုသောအခါ မိခင်ဖြစ်သူက လဲ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခွင့်ပြုလိုက်သောကြောင့် သာသနာ့ဘောင် ရောက်ခဲ့ရ၏။ ရဟန်းဘောင် ရောက်သည်မှ စ၍ ရှောင်ရန် ဆောင်ရန် ၀ိနည်းများကို လေ့လာပြီး တောရဆောက် တည်ကာ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကို အသည်းအသန် ကြိုးစားတော့၏၊ ယနေ့အချိန်အထိနှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာခဲ့ပြီ၊ ကျောပြင်ခင်းကာ အိပ်စက် ဖူးခြင်းမရှိ ဟု ဆိုလျင် စာဖတ်ပရိသတ်များ ယုံနိုင်စရာ မရှိပေ၊ စာရေးသူလဲ ကိုယ်တိုင် ကြုံမှ ယုံမှတ်ကာ ကြည်ညိုရတော့သည်။ ၂၄ နာရီတွင် ဆွမ်းတထပ်သာ ဘုဉ်းပေး၏၊ တနေရာတွင်သာ ဆွမ်းဘုန်း၏၊ ဆွမ်းခံလို့ ရသမျှ အချို၊ အချဉ်၊ အခါး အစပ် အားလုံး ပတ္တပိုဏ် သာ ဘုဉ်းပေး၏၊ ပံ့သုကူ သင်္ကန်းကိုသာ ၀တ်ရုံ၏၊ တကယ်တော့ သံဃာအချင်းချင်း ကြည်ညို ဖို့ တော်တော်ခဲယဉ်းတတ်သည်ကို ၀န်ခံရပါမည်၊ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်များကို နားလည်နေသော ကြောင့် ဘယ်လိုစကားပြောရင် ဘယ်အာပတ်သင့် သည်၊ ဘယ်လို ပြုမူရင် ဘယ်အမျိုးအစားအာပတ်သင့်သည် စသည် ဖြင့် သိနေ သောကြောင့်ပင်။ နောက်တဖန် ထိုဆရာတော်နှင့် စာရေးသူတို့ စကားစမည်ပြောဆိုကြသောအခါ ပညာရေးအကြောင်း၊ နိုင်ငံခြား သာသနာပြုနည်းများ၊ အိန္ဒိယ သီဟိုဠ်ကျွန်း ယနေ့ခေတ်သာသနာရေး အခြေအနေ စသည်ဖြင့် အချိန်တော်တော် ကြာ ကာပြောမိကြ၏၊ လာသမျှ ပရိသတ်အားလုံးကို ဒီလို ထန်းလက်တဲကုပ်လေးထဲမှာ အဖူးမျှော်ခံလေ့ရှိတယ်သံဘိုတောရ ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှ မဟာဗောဓိ ညောင်ပင်ဒီနေရာက အရင်က သိမ်ဟောင်းရှိသော နေရာမှ သိမ်ငုတ်အချို့နှင့် စေတီလေးတစ်ဆူ တရားရှိသူကို တရားက ပြန်လည် စောင့်ရှောက်သတဲ့၊ တောထဲတောင်ထဲ၌ စေတီတစ်ဆူ တည်ထားလိုသော ဆရာတော်၏ ဆန္ဒကို မည်သူက အကောင်အထည်ဖော်ကာ ဖြည့်ဆည်းပေးလေသည် မသိ၊ သီဟိုဠ်ကျွန်း စေတီပုံများနှင့် အိန္ဒိယ ဗုဒ္ဓဂါယာမှ ရှေးဟောင်းလက်ရာများ ပေါင်းစပ်ကာ တည်ထားခြင်းဖြစ်၏၊ စေတီအတွင်းတွင် အမျိုးပေါင်းများစွာသော မုဒြာပုံသဏ္ဍာန် ဆင်းတုတော်မျိုးစုံ တွေ့ရ၏၊ နောင်ကျမှ မုဒြာအကြောင်း သိကောင်းစရာ ဆောင်းပါးကို ဆက်တင်ပါအုံးမည်။ ( စာရေးသူ တွေးမိသည်ကတော့ မမြင်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း တို့၏ တောင်းပန်မှုကြောင့် တည်ထားသည် ဟု ထင်မြင်မိသည် )ဟောဒီလို လက်ရာမြောက်တဲ့ ဘုရားရှင်ဆင်းတုတော်တွေကြောင့် ပိုပြီး ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ရ၏ဒီပုံလေးတွေက သံဘိုတောရကျောင်းအတွင်း မြေအောက် လှိုဏ်ခေါင်းတူးကာ တရားဓမ္မ ကျင့်ကြံအားထုတ်ရာနေရာများ ဒီအတွင်းမှာ လှိုဏ်ခေါင်းရှိပြီး စကြံလျောက်ကာ ရှုမှတ်နိုင်ဖို့ စကြံလမ်းလဲ ပါတယ်ဓာတ်ပုံကို ဆရာတော်မသိအောင် ရိုက်ခဲ့တာမို့ သဘာဝအတိုင်းသာ ဖူးမြင်နိုင်တာကို နားလည်ပေးနိုင်ကြမယ် ထင်ပါတယ် အခုလို လာရောက်ဖူးမြှော်နေသူတွေကလည်း အရပ်လေးမျက်နှာက လာကြတာ အများကြီးပါပဲ ဒုတိယပိုင်း ဆက်ပါအုံးမည်
Traveler in Myanmar ( ထီးတော်တင်ပွဲ၊ မုံရွာ )
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပရိယတ် ပဋိပတ် စွယ်စုံရ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဇာတိ မုံရွာ စိုင်ပြင်ကြီးဘက်ကို ရောက်ဆဲမှာ ကြုံခဲ့ရတာက ထီးတော်တင် ပူဇော်ပွဲပါ၊ စိုင်ပြင်ကြီးရွာရဲ့ အရှေ့တောင်အရပ် ၄ မိုင်လောက် ဝေးတယ် ထင်ပါရဲ့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒီပဲရင်းမြို့နယ် ကောင်းစုရွာက ရွာဦးစေတီတော်လေးမှာပါ၊ တောရွာ အညာဒေသ ကျေးလက်တွေရဲ့ ထီးတော်တင်ပွဲမှာ စာရေးသူလဲ ပါဝင် ဆင်နွှဲခွင့် ရခဲ့တာကို မှတ်တမ်းတင်ထားမိတယ်၊ အားလုံး အညာဒေသ ကျေးလက် ဓလေ့လေးတွေကို ခံစားနိုင်ဖို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ် စိုင်ပြင်ကြီး လယ်တီ သာသနာ့ဗိမာန် မုဒ်ပေါက်ရှေ့မှ ကားတန်းများ ဖြတ်သန်းလာစဉ်၎ မိုင် ခရီးလောက် ဟောဒီလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လှည့်လည်အပြီးမှာတော့ -ရွာဦးထိပ်က စေတီတွေဆီကို ရောက်ပါပြီ ထီးတော်မတင်ခင် ပင့်သံဃာတော်များက ဘုရားဆင်းတုတော်များကို အနေကဇာ တင်ကြတယ် သံဃာတွေနဲ့ ထီးတော် ကုသိုလ်ရှင် ဒကာ ဒကာမများ တက်ညီ လက်ညီ ပျော်ပျော်ပါးပါးအထက်ဆုံးထိ တက်ပြီး ထီးတော်တင် လှူဒါန်းရတဲ့ အရသာကလဲ ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးမှ သိရတယ်၊ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓါရမ္မဏ ပီတိကို ရရှိခံစားစေတယ်၊ သိပ်ကောင်းတဲ့ ပီတိ ခံစားချက်ကို ရရှိစေတယ် ပရိသတ်အားလုံးရဲ့ မျက်နှာတွေက ကောင်းကင်ကိုပဲ မော့ကြည့်နေကြတယ်၊ ထီးတော်ကို ဖူးနေတာလား ( ဒါမှမဟုတ် ) ထီးတော်တင်ပြီး အပေါ်က ကျဲချမယ့် ပိုက်ဆံတွေကို စောင့်နေတာလား မသိတတ်ဘူး ထီးတော်တင်ပြီး ဆန်တွေ ကြက်သွန်တွေ ဆပ်ပြာ သွားတိုက်ဆေး စတဲ့ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူတာကိုတော့ စာရေးသူအနေနဲ့ အဲဒီ နယ်ဘက်မှာပဲ တွေ့ဖူးသေးတယ်၊ ဒေသန္တရ ဗဟုဿုတ ဆိုတာ ဒါပါပဲ၊ ( တစ်ကျောင်း တစ်ဂါထာ၊ တစ်ရွာ တပုဒ်ဆန်း) လို့ ရှေးလူကြီးများက ဆိုထားတယ် မဟုတ်လား နေ့လည်ပိုင်းမှာ အလှူအားလုံးအတွက် ရေစက်ချ အမျှဝေကြတယ်၊ အဲဒီ ထီးတော်တင်ပွဲမှာ စာရေးသူ ပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဓမ္မစကားလေးက ထေရာပါဒါန် ပါဠိတော်မှာ လာရှိတဲ့ ပုဠိန ထူပိယ မထေရ်အကြောင်း၊ အဲဒီမထေရ်က ရှေးဘုရားတစ်ဆူရဲ့ လက်ထက်မှာ မြစ်ကမ်းဘေး သဲပုံစေတီလေးကို တည်ထားပြီး ဘုရားဂုဏ်တော်များကို အာရုံပြုကာ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်း ကို ပွားများခဲ့ပါသတဲ့။ အဲဒီ ကောင်းမှုလေးကြောင့် ယခုဘ၀ ဂေါတမဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူသည့် ကာလအထိ ကမ္ဘာပေါင်းများစွာ၊ အပါယ် ဆင်းရဲကို မကျပဲ ဒီဘက်ဘ၀မှာ ပုဠိန ထူပိယ မထေရ်ရယ်လို့ ရဟန္တာတစ်ဆူဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ မြစ်ကမ်းဘေးမှာ သဲပုံစေတီလေး တည်ထားတာတောင် ဒီလောက် အကျိုးပေးတာ အခုလို သိန်းပေါင်းများစွာ အကုန်ကျခံပြီး ဘုရားပြင်ကာ ထီးတော်လှူဒါန်းကြတယ် ဆိုရင် ..... ......
သတ္တ၀ါအားလုံးအား ကုသိုလ်ကောင်းမှု အမျှ အမျှ ပေးဝေပါ၏ ......
Traveler in Myanmar ( စံပြမင်းရွာ ၊ အလယ်တန်းကျောင်...
ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာဖွေသူ ( သို့ )သံဘိုဆရာတော်( ၂ ...
Traveler in Myanmar ( လယ်တီဆရာတော်ဇာတိ၊ စိုင်ပြင်ြ...
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဓမ္မစာအုပ်များ လှူဒါန်းပွဲ
Traveler in Myanmar ( အင်းဝ မယ်နုအုဋ္ဌ်ကျောင်း)
Traveler in Myanmar ( ပြင်ဦးလွင် )
သူတို့အမေး - သိကြားမင်း ငရဲကျပါသလား
သဗ္ဗညု ဘုရားရှင်တို့၏ အနှိုင်းမဲ့ ဥာဏ်တော် ( ၁၀ ) မျ...
မနှစ်က ငါနှင့် ဒီနှစ် ငါ